Wasiirkaa warbarashada Soomaaliya oo sheegay in jaamacadaha qaar la xiri doono | XORRIYA NEWS
Home Wararka Wasiirkaa warbarashada Soomaaliya oo sheegay in jaamacadaha qaar la xiri doono
Wasiirkaa warbarashada Soomaaliya oo sheegay in jaamacadaha qaar la xiri doono
Wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya, Xildhibaan Cabdullahi Goodax Barre oo la hadlaayay warbaahinta ayaa sheegay in dhowaan qiimeyn rasmi ah lagu sameyn doono tayada dhammaan Jaamacadaha ku yaalla gudaha dalka, gaar ahaan jaamacadaha magaalada Muqdisho.
Wasiir Goodax Barre ayaa sheegay in muhiimada ay tahay in la ogaado cilmiga ay ardayda Soomaaliyeed siiyaan Jaamacadaha dalka, asigoona sheegay in la qiimeynaayo tayada Jaamacadaha, si loo ogaado Cilmiga ay ardaydu siiyaan.
Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in qiimeynta ay haatan bilaabatay, islamarkaana guddi gaar ah loo saaray, kaas oo soo bandhigi doono dhammaadka sanadkan 2020-ka.
Wasiirka waxbarashada Soomaaliya oo hadalkiisa sii wata ayaa hoosta ka xariiqay in Jaamacadaha aan duruustooda sugneyn aysan dalka ka sii shaqeyn doonin, halka kuwa tayadooda ay wanaagsan tahay ay sii wadan doonaan shaqada, sida uu hadalka u dhigay.
“Waa arrin lagu hubinayo awoodda tacliinta Jaamacadaha, kuwa tayadoodu wanaagsan tahay waa ay sii shaqeynayaan, halka kuwa meelaha dhexdhexaad ah la isu biirinayo si awooddoodu mid loogu dhigo, balse Jaamacadaha aan duruustooda sugneen ma sii shaqeyn doonaan” ayuu yiri siihaya wasiirka waxbarashada Somalia.
Hadalka wasiirka ayaana ku soo aadaya, xilli sanadihii dambe ay aad u soo kordhayeen Jaamacaha ku yaalla dalka, kuwaas oo qaarkood laga deyriyey tayooda waxbarasho.